Wiki puzzle.svg & Ndash; Miara-miombon'antoka amin'ny toe-javatra i Semalt
Wiki puzzle.svg - Miara-miombon'antoka amin'ny toe-javatra i Semalt
Julia Vashneva, Semalt Mpitantana Success Successor, dia milaza fa ny mpikaroka sy ny manam-pahaizana avy ao amin'ny Harvard Business of Business dia vao haingana no nanadihady mikasika ny doka Wiki sy ny Rakipahalalana Brittanica. Nandinika lahatsoratra maherin'ny 4.000 ireo lahatsoratra momba ny teny Anglisy izay mifantoka amin'ny lohahevitra mampiady hevitra toy ny politikan'i Etazonia.
Feng Zhu sy ny mpiara-dia aminy, Shane Greenstein, dia nametraka lahatsoratra mihoatra ny 4000 ho "mena" na "manga", mba hamaranana ny filaharana ara-politika tamin'ny taona 2012. Tamin'ny resadresaka, naneho ny fankasitrahany an'i Shane Wikipedia, na dia eo aza ny fahasamihafana ara-politika eo amin'ny Demokraty sy ny Repoblikana.
Na i Shane Greenstein na i Feng Zhu dia samy namaritra ny fehezanteny manan-danja ampiasain'ny antoko tsirairay, mba hanatsarana ny famintinana politika. Wiki ny tranonkala be mpitsidika indrindra eto an-tany, ka ireo mpikaroka sy manam-pahaizana dia nanondro ireo fehezanteny manan-danja izay samy manana ny hevitry ny Repoblikana sy ny Demokraty.
Azo inoana fa nampiasa fehezanteny manan-danja toy ny 'fifindra-monina' sy ny 'fandrosoana ara-toekarena' ny Repoblika. Amin'ny lafiny iray, ny Demokraty dia mety hampiasa ny zon'ny 'zon'ny sivily' sy ny 'toetry ny ady.' Nandritra ny dingana voalohany, ny lahatsoratra sy ny soratra navoakan'ny olona dia nizaka ny fomba fijery liberaly, ka noho izany dia mampiseho endrika vetivety raha ampitahaina amin'ny Britannica.
ny wiki dia milalao anjara mavitrika amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Mpanonta 2.8 tapitrisa miasa amin'ny fanavaozana lahatsoratra ao amin'ny Wiki no nametraka ny foto-pinoany ary nanjary nihanihany ny fotoana.
Nipoitra ny fanontaniana iray na tsia ireo mpanoratra sy mpirotsaka an-tsitrapo manana fironana manga mitsidika lahatsoratra manga sy vice versa. Niteny tamin'i Quartz i Juliet Barbara fa ny fomba fijery voalanjalanja sy fiaraha-miasa dia voaporofo. Ny valiny dia tohanan'ny adiresy IP mitsidika ilay tranonkala. Ny Wikipedia ho antony tsy mitongilana dia tsy nihetsiketsika tamin'ny vokatra.
Nolazain'i Barbara koa fa ny Wikipedia dia niasa tamin'ny fahitana ny fitaintainana teo amin'ireo mpanonta sy mpampiasa mety, ary ny fanesorana ny fitongilanana tanteraka. Vao haingana, ny Wiki dia nametraka fitsipika sy fitsipika napetraka mba hitantanana ny mpampiasa amin'ny fomba fijeriny sy ny fanehoan-kevitra momba ny lohahevitra manokana. Araka ny voalazan'i Greenstein, ny famoahana sy fanovana ny lahatsoratra dia mitaky loharano azo antoka sy fototra. Ny vondrom-piarahamonina Wikipedia dia tsy mamela ireo mpirotsaka an-tsitrapo sy mpanoratra hanova ny lahatsoratra fanadihadiana momba ny hevitra mifototra amin'ny hevitra.
Ireo mpandray anjara sy ireo tonian-dahatsoratra miaraka amin'ny foto-kevitra ara-politika samihafa mifototra amin'ny resadresaka an-tserasera dia tranga iray izay nahatonga ny fahombiazan'ny wiki mba hanomezana mpanjifa manana fahalalàna malalaka manerana izao tontolo izao. Ho an'ireo mpahay siansa sy mpitsidika izay mihevitra ny Wikipedia ho fampielezan-kevitra an-tserasera, dia nisy fanadihadiana tranga vao haingana notontosain'ny mpanoratra avy ao amin'ny Harvard School of Business. Araka ny filazan'ny toe-draharaha, Wikipedia dia iray amin'ireo sehatra tsara indrindra amin'ny aterineto izay miasa ho toy ny fampidinana tsy ara-dalàna ny mpanjifa manana ideolojia samihafa amin'ny lohahevitra mampiady hevitra Source .